Umzi mveliso wokukhanya | Kwichina Abavelisi bokukhanya, abaxhasi
Iklasi 1 ukukhanya kwengxolo ye-LED grille-proof
Idibanisa ukusasazwa kokukhanya okubalaseleyo, ukulahleka kwamandla aphantsi kunye nolawulo lokukhanya kwizikhanyiso enye ukufikelela kwinqanaba eliphezulu leemfuno zokukhanya kweofisi. Inokutshatiswa ngokuphindwe kabini, kathathu, ezine ezikhethiweyo zetyhubhu, ezifanelekileyo kwiimfuno ezahlukeneyo zokuhambisa ukukhanya okukhanyayo, inqanaba lokukhutshwa kokukhanya okungaphezulu kwe-70% yevolumu encinci, efanelekileyo ukuhambisa, ukugcina, ukufakela. Unobumba u "V" umela into efakelweyo, unobumba u "X" umela uphahla. Zilungele izakhiwo zeofisi, iiofisi, iindawo ezinkulu zokuthenga, amagumbi okulinda, iifektri, izikolo, izibhedlele kunye nezinye iindawo zikawonkewonke zangaphakathi.
Ukonga umbane 150W 250W 400W ukukhanya kwemigodi ye-LED
Zilungele izityalo zeshishini, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu, iholo lokulinda, iholo lokulinda, iziko lomboniso, indawo yokwenza umthambo kunye nokunye ukukhanya.
Ukukhanya komdibaniso we-braket wokukhanya kwe-ofisi, indawo yokuhlala, ukusetyenziswa kwemali
Uyilo lwenoveli, inkangeleko entle, umthamo omncinci. Ifanele iofisi, ikhaya, ukukhanya kwezorhwebo, njl.
i-aluminium alloy ukukhanya kwehla kweenyembezi kunyango, ukutya, ucoceko, umbane, igumbi elicocekileyo
Umthunzi okhanyayo uyilelwe ngohlobo lweenyembezi. Isibane sidityaniswe nesikhombisi okanye sifakelwe ngokwahlukeneyo, ngentambo yonxibelelwano ekhawulezayo ngaphakathi. Umzimba wesibane kunye nesiporo senziwe ngamacandelo esinyithi kwaye sitshixiwe ngezikhonkwane zensimbi ezingenasici ukuze kuqinisekiswe ukuba umzimba wesibane kunye nesiporo asiwi. Isebenza amayeza, impilo, ukutya, elektroniki kunye neminye imigangatho ephakamileyo izibane zokuhlanjululwa.
Ukukhanya okuqaqambileyo kuphuma kucaba ngokupheleleyo, kunye ne-Angle ekhanyayo ebanzi. Uyilo lwesekethe olukhethekileyo, ukunqanda isibane esinye esibi sichaphazela umphumo, ngaphandle kokuphazanyiswa ngonomathotholo, ngekhe kungcolise okusingqongileyo. Ukugcina amandla, ukukhanya okuphezulu, akukho mercury, akukho infrared, akukho ULTRAVIOLET, akukho kuphazamiseka kwe-electromagnetic, akukho mphumo we-thermal, akukho radiation, akukho stroboscopic phenomenon. Ubunzima bokukhanya kunye nokulula ukufaka. Zilungele iihotele, amagumbi okuhlangana, iifektri okanye iiofisi, UKUSETYENZISWA kwezorhwebo, iindawo zokuhlala okanye zikawonke-wonke, izikolo kunye nezibhedlele apho ukonga umbane kunye nombala ophezulu wokunikezela ngesibane sokukhanyisa kuyafuneka.
iklasi 1 yokuphakamisa umva okanye uhlobo olusezantsi lokukhanya okucocekileyo
Ukukhanya kuhambelana ngokupheleleyo ne-keel, kwaye kulula ukuyifaka. Umzimba okhanyayo kunye nesembozo esingasemva sigcwele ukutywinwa koxinano oluphezulu. Akukho luthuli, kulula ukulicoca, akukho litha, ikhava yangemva yamkela uhlobo oluvulekileyo lomnyango, olulungiswe ngombala ophezulu, kulula ukuluvula nokuluvala, kulula ukulugcina, impazamo yesayizi iyonke ingaphantsi kwe +/- 1mm, tyaba iyahambelana ne-JS141.
I-18W 40W 80W ikhuphe ukukhanya kwe-LED SMD kwigumbi elicocekileyo
Uyilo lwesakhelo sezibane ezibengezelayo ezihlambulukileyo zi-ultra-thin kwaye zikufutshane nophahla. Umzimba wesibane kunye nesembozo esingasemva sigcwele ukutywinwa koxinano oluphezulu. Akukho luthuli, kulula ukulicoca, akukho litha. I-diic semiconductor diode yakhokelela kwitekhnoloji yokukhanyisa ibuphucula kakhulu ubomi bomthombo wokukhanya, kwaye ayiqulathanga i-mercury kwizibane zemveli ezibengezelayo. Isibhedlele, ikhemesti, ukuqhubekekiswa kokutya, ukugcinwa kunye nendawo yokukhanyisa igumbi lokucoca indawo efanelekileyo. Iindidi zobukhulu bokukhanya komzimba kunye neentlobo zemithombo yokukhanya ziyazikhethela. Isetyenziselwa i-100-10000 yenqanaba lokucoceka.
Ubungqina bamanzi i-9W 18W 25W i-chip yohlobo lwe-chip ukukhanya okungqina ubungqina
Ukukhanya kudibana nenqanaba le-IP65. Ubungqina obungenamanzi, ubungqina bokufuma, ubungqina bokutywinwa ngothuli, isakhiwo esifanelekileyo, esihle kunye nesisa, uyilo lokutshixa olulungele umsebenzisi, kulula ukuyifaka nokuyigcina. Isiphatho sesibane esingatshatanga, i-250V ekumgangatho ophezulu weplastikhi yokubamba yobunjineli, amandla oomatshini aphezulu, ubukhulu kunye nokuphakama okuqhubela uhlobo olujikelezayo, ukusebenza kakuhle koqhakamshelwano. Uyilo lwenoveli, ubumbano lwenkangeleko, inkangeleko entle, kulula ukuyifaka kunye nokuyigcina, ukuqala ngokukhawuleza. Ifanelekile indawo yangaphakathi nangaphandle engenawo manzi, ubungqina bokuba luthuli kunye neemfuno zobungqina bokufuma.